Shina Fampiroboroboana volo vaovao vaovao malaza sy mpanamboatra | Yongsheng
Pre-ny famokarana ------santionany------ ny fandraisana ho mpikambana-Material------ fividianana-Component ------anjara------ Tsindrona-Quality------ maso-Component ------anjara ------surface------ farany-Quality ------maso-Fivoriambe-Quality ------fisafoana-fonosana.
Manana borosy volom-bolo malaza sy lamaody izahay.
Azonao atao ny misafidy borosy marevaka volom-borona UV voninkazo miloko, borosy volom-borona mahazatra miaraka amin'ny volon'ny nilona, ​​borosy vita amin'ny volo vita amin'ny kofehy misy lavaka eo ambonin'ilay ondana, borosy mando miloko misy fehikibo vita amin'ny volo, voninkazo mamirapiratra UV vita amin'ny herinaratra borosy volo, tsindrona mahazatra borosy volom-bolo, borosy maneso miaraka amin'ny volom-borona sy nylon mifangaro, borosy lena amin'ny famolavolana loko fanontana 3D.
Ary manana fitaovana vaovao izahay manantena plastika, hazo ary volotsangana. Izy io dia fitaovana biomassa mitambatra. Izy io dia karazana fitaovana fanoherana vaovao izay misy akora macromolecular sy fitaovana biomass. Satria ny atin'ny fitaovan'ny tontolo iainana vaovao dia mihoatra ny 50%, ny vokatra dia manana tombony amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny karbaona ambany. Ary manana fibre sy mololo volotsangana misy izahay.
Ny borosy manaraby dia afaka manatsara ny fifehezana ny fampiraisana miaraka amin'ny volon'ny boar sy nylon. Ratsy vodin-damosina Tapered manasongadina faran'ny pick ho an'ny fisarahana, fisarahana, ary ny mikasika farany. Volom-boaloboka fohy hamoronana fihenjanana sy hamirapiratra ary volom-borona nylon nohatsaraina ho mora mamakivaky ny volo. Ny volom-boaloboka dia manadio sy manadio ny volo ary mizara menaka voajanahary amin'ny volo.
Ny borosy volo volo mando ho an'ny volo dia vita amin'ny fitaovana anti-static, ny tsimatra malefaka dia mitondra hamafin'ny hery sy faharetana. Vahaolana tonga lafatra amin'ny fiolahana volo, olan'ny electrostatic ary mora diovina.
Previous: Borosy volo vita amin'ny hazo sy volotsangana
Manaraka: Volom-bolo kely misy sarona fingotra miloko, uv herinaratra, famindrana rano
Borosy vita amin'ny volon'ny volotsangana
Sokitra borosy volo
Oem borosy volom-bolo
Borosy volo vita amin'ny hazo matihanina
Borosy volo fanorana hazo